काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तनहुँको छ गाउँपालिकाका करीब तीन हजारले निवेदन दिएका छन् । नागरिकका लागि न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका जिल्लाका छ गाउँपालिकाका दुई हजार...
काठमाडौं । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का तीन जना पत्रकारको जागिर धरापमा पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको ठाडो आदेशमा राससका अंग्रेजी डेक्सका सोमनाथ लामिछने, मोहनी रिसाल र जीवन भण्डारीको जागिर धराममा परेको हो । प...
कांग्रेस सांसद सिंहको प्रश्न : कर्मचारी सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था किन उलंघन गरेको ?
काठमाडौं । सरकारले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गरेर ऐन उलंघन गरेको आरोप कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लगाएका छन् । कांग्रेसका सांसद सिंहले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् । सिंहले २ वर्षसम्म कर्मच...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा फाराम भर्न छुटेकालाई तत्काल भर्नको लागि आग्रह गरेको छ । यही वैशाख मसान्तसम्म फाराम भर्ने समयसीमा रहेको र सरकारले पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम भएकाले छुटेकालाई कामपाले आग्रह गरेको हो । &...
काठमाडौं । देशभरका सरकारी कार्यालयका वेबसाइट नखुल्दा सरकारी सेवा प्रभावित भएको छ । सरकारी सिस्टम नयख.लउ डाउन भएपछि देशभरका सवारी वेबसाइट नखुलेको र देशरभरका सरकारी सेवा प्रभावित भएको हो । यसले गर्दा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । हाल सरकारले...
काठमाडौं । बेलायती गोर्खा सैनिकमा ४ सय ३२ जना नेपाली युवाको लागि भर्ना खुला गरिएको छ । आइतवार प्रकाशित एक सूचना अनुसार भर्तिको लागि दर्ता, ब्रिटिश गोर्खा पोखरा, ब्रिटिश गोर्खा धरानमा आगामी २७ मे देखि जुलाई ७ सम्म एकसाथ आवेदन खुल्ला गरिएको छ ।
कलिङ भिसा : चार दिनमा ६४ ले लिए मलेशियाका लागि श्रम स्वीकृति
लोकपथ संवाददाता चैत २९, २०७५ | शुक्रबार
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कलिङ भिसामार्फत मलेशिया जाने कामदारका श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि चार दिनमा ६४ ले श्रम कार्यालय ताहाचलबाट स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले यही चैत १७ गतेदेखि खुला गरेपनि कार्यालयले भने २५ गतेबाट श्रम स्वीकृति दिन ...
प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा डिएसपीको काज सरुवा, को कहाँ ?
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)को काज सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीनजना डिएसपीको काज सरुवा गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय चितवन टाँडीको इञ्चार्जमा डीएसपी सन्तोष आचार्यलाई पठाइएको छ । टाँडीमा कार्यरत ...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूहतर्फ रिक्त प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान पदहरुमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पदपूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरिएकोमा ...
काठमाडौं । सरकारले सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पासमा अंकुश लगाउने भएको छ । सरकारले सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पासमा अंकुश लगाएसँगै पत्रकारहरुले निर्वाध रुपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधान र वैयक्तिक ...
देशभित्र काम गर्नेभन्दा विदेशमा गएर जागिर खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो : प्रचण्ड
लोकपथ संवाददाता चैत २०, २०७५ | बुधबार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रोजगारी सिर्जनाका लागि शिक्षामा गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंको होटल सोल्टीमा शुरु भएको राष्ट्रि विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा ब...
लोकपथ संवाददाता चैत १८, २०७५ | सोमबार
काठमाडौं । नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यका रुपमा ठहरिएको दक्षिण कोरियाप्रति युवाको निकै आकर्षण देखिएको छ । कोरियाले सन् २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपिएस० मार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने घोषणा गरेयता प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या बढेको बढ्या छ ...
कर्मचारी समायोजक सम्पन्न
लोकपथ संवाददाता चैत १४, २०७५ | बिहिबार
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी समायोजन पूर्ण रुपमा सकिएको छ । मन्त्रालयले तीन तहमा १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको जनाएको छ । बिहीवार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सह सचीव के...
नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर, नेपाली कामदारलाई जापान जान खुल्यो बाटो
लोकपथ संवाददाता चैत ११, २०७५ | सोमबार
काठमाडौं । जापानमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सोमवार सरकार र जापानी पक्षीबीच समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको छ। ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा सोमवार आयोजित विशेष कार्यक्रमकाबीच नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको हो । नेपालका तर्फबाट श्रम, ...
काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच आज (सोमवार) एमओसीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । नेपाली कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा आज दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने भएको हो । मध्याह्न १२ बजे होटल हिमालय, कुपण्डोलमा एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर हुने भएको ह...
सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्वीर सेयर भइरहेको छ । (इपिएस) अन्तर्गत कोरिया जानको लागि यूवाहरु रातभर लाईनमा बसे । उक्त तस्वीर सेयर गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ता उपेन्द्र अधिकारीले लेखेका छन्, नेपालीहरु कति मुर्ख मास्टर्स सकेको सर्टिफिकेट बोकेर अनलाई फर्म भर्ने सिस्...
काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच आगामी सोमवार श्रम समझदारी हुने भएको छ । जापानमा नेपाली कामदार पठाउनेबारे दुई देशबीच श्रम समझदारी हुन लागेको हो । श्रम समझदारीपत्रमा श्रम मन्त्रालयका सचिव र जापानी राजदूतले हस्ताक्षर गर्दै छन् । सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजा...
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भोलिदेखि खुल्ने
लोकपथ संवाददाता चैत ७, २०७५ | बिहिबार
काठमाडौं । कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भोलि (शुक्रवार)देखि खुल्ला हुने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सन् २०२० को कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम खुल्ने भएको हो । ईपीएस परीक्षाको आवेदन फारम यही चैत १७ गतेसम्म भर्न सकिनेछ । ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २८ जिल्लाका एक हजार २ सय ४० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले २८ जिल्लाका ४ सय ५० सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा एक हजार २ सय ४० कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । केन्द्रका प्र...